Somaliland: Madaxweyne Silaanyo oo Xafiiskiisa ku Qaabiley Wafti uu Hogaaminayo Gudoomiyaha DP World Sultan Ahmed Bin Sulayem - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Madaxweyne Silaanyo oo Xafiiskiisa ku Qaabiley Wafti uu Hogaaminayo Gudoomiyaha DP...
Ka dib waxa uu gudoomiyaha shirkadu ka hadlay kormeerkii ay ku sameeyeen saaka dekeda caalamiga ee Berbera iyo qaybeheeda kala duwan, waxanu si gaara u amaanay masuuliyiinta iyo shaqaalaha dekeda Berbera, isagoo si gaarana farta ugu fiiqay Maareeyaha dekeda Berbera Eng Cali Cumar Maxamed (Cali Xoor-xoor), oo uu ku sifeeyey nin aqoon dheer u leh dekeda uu maamulaha ka yahay, kuna haboon shaqadiisa, markuu arrintaa ka hadlayeyna waxa uu yidhi
”waxa aanu soo kormeernay dekeda iyo qaybeheeda waxa aanu ku soo aragnay shaqo wanaagsan, inay meel wanaagsan ku taallo, dadka maamulayaana ay yihiin kuwii ku haboonaa shaqadaasi. Waxa kale oo aanu soo aragnay deked ku taalla meel istaraatiiji ah, oo ah dekedii aanu rabnay in aanu la macaamilno”.
Dr. Sacad Cali Shire | Wasiirka Arimaha Dibadda Somaliland
Isagoo hadalkiisa sii wata wasiirku waxa uu yidhi
“waxan soo dhawaynaynaa maalgashiga Berbera, dhismaha iyo horumarka Berbera”. Wasiirku waxa uu intaa ku daray in aanu mashruucaasi ku ekayn dekeda Berbera iyo hawlaheeda oo qudha, waxanu sheegay inay la socoto qaybta loo yaqaano, qaybta ganacsiga xorta ah, isagoo arrintaa ka hadlayana waxa uu yidhi “waxa la socda qaybta ganacsiga xorta ah lagu sameeyo (Free Zone) oo la mida sida qaybta Jabal Cali ee ku taala Imaarada Dubai. Waxa kale oo ku lamaansan Isfahan guud oo aanu kala heshiinay shirkadaas, kana mid yihiin wadada isku xidha Berbera iyo Wajaale, beeraha, tamarta, xagga shaqo abuurka oo labada dhinacba faa’iido u leh. Waxa kale oo aanu kala hadalnay, dal ku galka ay ganacsatadeenu isticmaali doonaan oo ah sharciga ay dalkaa ku geli karaan kuna joogi karaan, waxanay naga ballan qaadeen inay arrintaa ka hawlgelayaan, codsina u qadimayaan amiirka dalkaasi, sidii loogu fudaydin lahaa arrintaas”.
Wasiirku waxa uu sii dhex galay nuxurka heshiiska iyo faa’iidooyinkiisa, waxanu yidhi
“Heshiiskani waxa uu dhiirigelinayaa dad badan oo danaynaya inay dalkan maalgaashadaan, marka dalka la maalgashadana shaqo ayaa ka abuurmaysa, taasina waxay inoo suurto gelinaysaa inaynu maarayno dhallinyaro badan oo kuweena ah oo shaqo la’aan haysato, taasoo ah mudnaanta dawladan. Wuxuu u gudbay faah-faahin uu ku sameeyey mashruucan waxanu yidhi, mashruuca wejigiisa hore waa laba qaybood. Qaybi waa dekeda iyo waxa laga qabanayo, waxana weeyi in la balaadhiyo, lana tayeeyo ee maaha uun waa la maamulayaa oo maamulka dekeda hore inagu waynu ku fillan nahay. Waxase weeye in dekeda la waynaynayo oo lagu darayo 400M mark hore, iyadoo mardanbena lagu dari doono 400M oo kale. Mar uu ka waramayey shaqaalaha dekeda iyo mustaqbalkoodu sida uu noqon doono, wasiirku waxa uu yidhi shaqaalaha ka shaqeeya dekedu sidooda ayey uga shaqaynayaan.
Sultan Ahmed Bin Sulayem | Gudoomiyaha DP World
Wuu sii watay hadalkiisa oo waxa uu yidhi
“waxan booqday dekeda berbera iyadoo uu gadhwadeen noo yahay Eng Cali Xoor-xoor wanan ku farxay shaqada ka socotay iyo khibrada ay leeyihiin masuuliyiinta iyo hawlwadeenada dekeda ka shaqeeya, oo aan runtii u qirayo inay hayaan shaqo wacan”.
Wuxuu bogaadiyey agaasimuhu mawqica juquraafi ee dekeda berbera, waxanu yidhi
“waxa aanu aaminay halka Illaahay dhigay dekeda berbera ee ay dunida kaga taalo inay tahay meel wacan.” Waxa kale oo aan ku faraxnay sida wanaagsan ee ay ugu xidhan tahay itoobiya oo ku haboon koboca dadka iyo dhaqaalaha Itoobiya oo ay tahay dekedii ku haboonayd inay u adeegto dadkaa tirada badan.
Wuxuu ka hadlay oo kale qaybta ganacsiga xorta ah ee dekeda waxanu yidhi
“qaybta dekeda ee xorta ahi waxay noqon doontaa qayb ganacsatada caalamka soo jiidata”. Wuxuu u gudbay inuu ka waramo shirkada DP World iyo Awoodeeda, isagoo arrintaa ka hadlaayana waxa uu yidhi “waxan leenahay 30 sanadood oo khibrad dhinaca dekedaha ah. Waxan maamul ku leenahay dekedo gaadhaya 77 dekedood oo ku yaala 40 dal oo dunida ah gaar ahaan Afrika, kana mid yihiin Jabuuti, Masar, Algeria iyo Senegal iyo kuwo kale ”.